တရုတ်အမျိုးသားချည်ထားသောခြေအိတ် - item # WKS2001-08 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Yiwu Shunshui
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Winter Men Socks ၅ စုံတွဲစပျစ်သီးအစေ့ Knit Acrylic ပုံမှန်ခြေအိတ်များပူနွေးသောရောင်စုံခြေအိတ်
ပြီးပြည့်စုံသော jacquard ရက်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏ခြေထောက်များကိုချွေးမထွက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။ အဘယ်သူမျှမယားယံ, Non- စည်းနှောင်, ကြီးသောလမ်းပိုင်း; ထိပ်မှာရှိတဲ့ elastic ကအားကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကအဆင်ပြေနေပေမယ့်သင့်ခြေထောက်မညှစ်ဘူး။
acrylic နှင့်ဝါဂွမ်းပစ္စည်းများသည်သင့်ခြေထောက်ပေါ်ရှိသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးကြည်လင်သောခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပြီးတစ်နေကုန်သင်၏ခြေကိုနွေးစေသည်။ သူတို့ကလေကိုလည်ပတ်စေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ချွေးကငါ့ခြေအိတ်တွေထဲကျသွားပြီးငါ့ခြေထောက်ကိုအေးစေမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီဇိုင်း: ၎င်းသည်ရှည်လျားသော ၀ တ်စုံဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောခြေအိတ်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေသည့်ခြေအိတ်ဖြစ်သည်။ သင် ၀ တ်သမျှနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်စပျစ်သီးနှင့်ခေတ်မှီဒီဇိုင်းနွေးသောခြေအိတ်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူပေါ့ပါးခြင်းနှင့်မည်သည့်အခါသမယများအတွက်အလုံအလောက်စွယ်စုံ။
ပစ္စည်း Acrylic ၃၅%၊ ဝါဂွမ်း ၂၄%၊ polyester ၃၆% နှင့် spandex 5%
နည်းပညာ ဇာထိုးနှင့် Jacquard
ရာသီ နွေ ဦး / ဆောင်း ဦး / ဆောင်းရာသီ
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်: 30% အပ်ငွေ, 70% Balance ငွေပေးချေမှုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီပေးဆောင်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: တံဆိပ်တစ်ခုစီတစ်စုံ၊ Opp အိတ်တစ်လုံးထဲတွင် ၁၂ စုံတွဲရှိသည်
Q1 ။ အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ကိုရွေးချယ်?
A: ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။
Q2 ။ သင်အမှာစာလက်ခံနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောပြပါ။ သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမည်။
Q3 ။ ငါနမူနာယူနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ပါသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းရှိကုန်ပစ္စည်းနမူနာများအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထုံးစံအရနမူနာများကို ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိစောင့်သင့်သည်။ နောင်တွင်မှာယူမည့်အရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်နမူနာကောက်ကြေးပြန်ရလိမ့်မည်။
Q4 ။ ပေးပို့ချိန်ဘယ်လောက်လဲ။
A: ကုန်ပစ္စည်းနမူနာများတွင် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ; အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ခဲသတ္တုကို ၇ ရက်မှ ၄၅ ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီးပမာဏပေါ်မူတည်သည်။
Q5 ။ ငါအရောင်များရောစပ်နိုင်သလား?
A: ဟုတ်ပါသည်၊ အရေအတွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါအရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းရောနှောနိုင်ပါသည်။
Q6 ။ ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
A: ကုန်ပစ္စည်း 30% သိုက်, 70% Balance ငွေပေးချေမှုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီပေးဆောင်။
နောက်တစ်ခု: အမျိုးသမီး ၀ တ်ဖိထား - ခြေစွပ် # WKS2009-30
အမျိုးသမီးကျော်ဒူးအမြင့်ခြေအိတ် - item # WKS2032
Knit Touch Screen လက်အိတ်များ
Touch Screen ပါသောအားကစားလက်အိတ်များ